Basaasidda Maraykanka oo Spain gaartay - BBC Somali - Warar
Basaasidda Maraykanka oo Spain gaartay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 Oktoobar, 2013, 06:18 GMT 09:18 SGA
Edward Snowden ayaa ah ninka bixiyay sirta sirdoonka Maraykanka
Warbaahinta dalka Spain ayaa shaacisay warar sheegayo in sirdoonka Maraykanka ay muddo bil gudaheed ah ku dhageysteen telefoonnada 60 milyan oo oo ruux oo kunool dalkaas.
Wargeysyada waxay sheegayaan in faahfaahinta wararkani ay ka heleen qoraallo uu shaaciyay ninka baxsadka ah ee ka tirsanaan jiray sirdoonka Maraykanka ee Edward Snowden.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Spain ayaa u yeeray Safiirka Maraykanka u fadhiyo Madirid, waxayna ka wada hadli doonaan eedeymahan ugu dambeeyay.
Warkan ayaa soo baxayo iyadoo baarlamaanka Midowga Yurub la filayo in uu kulan la yeesho mas'uuliyiinta nabadsugidda ee Maraykanka iyo xubno ka socda aqalka Kongres-ka.
Waxay ka wada hadli doonaan wararka sheegayo in Maraykanka uu basaasay madaxda iyo dadweynaha reer Yurub.
Hogaamiyaha Jarmalka Anjela Merkel ayaa iyaduna Washington u dirayso saraakiil ka socota sirdoonka dalkeeda kaddib wararka sheegayay in sirdoonka Maraykanka ay telefoonkeeda gacanta dhagaysanayeen muddo 10 sano ah.
Jarmalka oo ka xun basaasidda Amerika24 Oktoobar 2013
France oo ka caraysan basaasidda USA21 Oktoobar 2013
Ninka bixiyay sirta sirdoonka Maraykanka10 June 2013
Amerika US: Khilaafada Islaamiga ah oo halis nagu ah